Sida Loogu Xullo Kanaallada Ugu Fiican Istaraatiijiyadda Taageerada Macaamiisha » Martech Zone
Sida Loogu Xullo Kanaallada Ugu Fiican Istaraatiijiyadda Taageerada Macaamiisha
Khamiis, Agoosto 29, 2019 Jimcaha, Agoosto 30, 2019 Ashwini Dave
Waqtiga Akhrinta: 8 daqiiqo
Markii ay soo ifbaxday qiimeynta ganacsiga, dib u eegista khadka tooska ah, iyo warbaahinta bulshada, dadaalada taageerada macaamiisha ee shirkaddaadu hadda waxay muhiim u yihiin sumcadda sumcaddaada iyo khibradda macaamiishaada internetka. Si hufan, si dhab ah, dhib malahan inta dadaalkaaga suuqgeyntu u weyn yahay haddii taageeradaada iyo waayo-aragnimadaadu ka maqnaato.
Sumadda shirkaddu waa sida sumcadda qofka oo kale. Waxaad ku kasbanaysaa sumcad adigoo isku dayaya inaad waxyaabo adag si fiican u qabato.
Macaamiishaada iyo magacaagu miyey is khilaafsan yihiin marwalba?
In kasta oo shirkaddaadu ay ilkaheeda u liqayso waaxda Adeegga Macaamiisha.
In kasta oo lagu qanco oo inta badan ka sarreysa rajada macmiilkaaga.
In kasta oo dhammaan kuwaas bilaashka ah (iyo kuwa qaaliga ah) bixinta iyo barnaamijyada daacadda ah aad iska qarxiso markasta iyo ka dib.
Haddii jawaabaha kuwan oo dhami ay yihiin “haa,” waa inaad dib ugu noqotaa guddiga sawirada oo aad dib u booqataa taadii istaraatijiyad adeegga macaamiisha. Si aan kugula socodsiino, aan fahamno "sababta" kahor "sidee" oo aan fiirino waxa ku kalifaya macaamiishaadu inay u soo jeestaan ​​dhinaca "mugdiga". Waa kuwan laba xaaladood oo macquul ah:
Muuqaalka 1aad: Waxaad Sameyneysaa Waddo Aad U Badan
Maaddaama ay u muuqato mid caqli-gal ah sida ay u muuqato, waxaa jira wax la mid ah in la sameeyo "aad u badan" markay tahay adeegga macaamiisha. Had iyo jeer xidid wax walba 'wax ku ool ah,' waxaan fahamsanahay in aysan suurtagal ahayn in taageero lagu bixiyo kanaal kasta ama joogno 'meel walba' macno ahaan. Hoos u dhaca raasumaalka aadanaha iyo kharashyada xad-dhaafka ah ayaa badanaa lagu sheegaa inay yihiin sababaha asaasiga ah ee tan. Si taas loo gaaro, caqligu wuxuu ina farayaa inay kafiicantahay hadaad doorato dariiqyada saxda ah ee macnaha uyeelaya macaamiishaada.
Marka, haddii aad u baahato, dib ugu laabo kanaal aan kuu shaqeynaynin. Laakiin tan ugu muhiimsan, si quruxsan u samee. Ereyga hawl-qabasho ahaansho. Waa kuwan liistada wax ku oolka ah ee talaabooyinka aad qaadi karto si aad u hubiso in macaamiishaadu aysan aakhirka dareemin xanaaq iyo qanacsanaan (sababtoo ah isbeddelada lama filaanka ah ee lama huraanka ah ee ku imaan doona waddadooda):
Soo gal kaaga maskaxda macaamiisha si looga hormaro caqabadaha / jahwareerka ay la kulmi karaan. Adoo qaata waddo naxariis leh, waad yareyn kartaa xanuunkooda oo waxaad si wax ku ool ah wax uga qabataa waxyaabaha ay ka welwelsan yihiin.
Hirgeli isbedelada marxaladaha halkii laga saari lahaa qalabka taageerada hal mar. Hal dariiqo oo sidaas lagu sameeyo waa iyada oo la siinayo ikhtiyaarro kale oo taageero ah isla markaana lagu muujiyo barxadda ka hor inta aan laga saarin nooc kasta oo ka mid ah taageerada macaamiisha.
Ka dooro inbadan ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee taageerada macaamiisha mar khadadka la xidho. Tilmaamaha waxbarashadu waxay si fiican ugu shaqeeyaan inay gacanta ku hayaan macaamiisha isla markaana u fidiyaan dhammaan xulashooyinka ay heli karaan.
Wax badan korsado qaab toos ah oo daacad ah oo xiriir markay tahay wacyigelinta macaamiisha ku saabsan kanaallada taageerada ee la heli karo ee ay iyagu hayaan. Tusaale ahaan, waa kuwan waxa sumadda Kinsta ay u gudbiso macaamiishooda:
Shaqada taageerada badanaa waxay u baahan tahay taxaddar, feker diiradda iyo baaritaanka. Haysashada taageerada kaliya ee khadka tooska ah waxay noo ogolaaneysaa inaan si fiican kaaga caawinno inaad ku xalliso boggaaga si deg deg ah oo wax ku ool ah, maaddaama injineeradeennu ay awoodaan inay xoogga saaraan dhammaan xooggooda si ay u xalliyaan welwelkaaga taageerada tirada ugu yar ee carqaladeynta iyo carqaladeynta suurtogalka ah. Tani, markeeda, waxay ka dhigan tahay in codsiyadaada taageerada si dhakhso leh loo xalliyo.
Ka fakar taageerada macaamiisha safar ahaan iyo cadee qodobbada taabashada muhiimka ah ee u sheegaya macaamiisha isbeddelada lagu sameeyay nidaamka taageerada. Kuwaas waxaa ka mid ah tusaalooyin sida u wareejinta bogagga degitaanka duugga ah ee gole bulsheed halkaas oo macaamiisha ay ka heli karaan waxyaabo cusub oo dhiirigelin u leh horumarka socda ee astaanta - taageerada la xiriirta ama haddii kale.
Key Takeaway: Maahmaahda ah, "inbadan ayaa kafiican" had iyo jeer lagama doorbido marka ay timaado adeegsiga aaladaha loogu talagalay soo bandhigida khibrad adeeg macmiil. Mararka qaarkood, ikhtiyaarrada ka-fiirsashada yar iyo kuwa xoogga badan ayaa shaqada si fiican oo dhaqso badan u qabta. Sidoo kale, macno ayey leedahay inaad ku hagto macaamiishaada inta 'isbeddellada' ah ee lagu sameynayo habka isgaarsiinta hufan oo wax ku ool ah iyo bixinta ikhtiyaarro taageero oo ka duwan.
Dhacdada 2aad: Diirada Ma Saarid “Ku Filan” Khibradaha Taageerada Macaamiisha "XUN".
Macaamiisha badiyaa waxay u jecel yihiin shirkad waxyaabaha ay soo bandhigto ee gaarka ah, qiimayaasha tartanka, sahlanaanta sahlanaanta, iyo alaabada tayada leh, iyo waxyaabo kale. Aad ayey u yartahay in "khibrad macmiil wanaagsan" ay ku soo baxdo liiska sababaha sababta ay uga doorbidaan astaanta A tan nooca B.
Si kastaba ha noqotee, si xiiso leh, adeegga macaamiisha oo xun badanaa waa mid ka mid ah sababaha aasaasiga ah ee ay macaamiisha u joojiyaan ku lug lahaanshaha astaan. Tusaalooyinka qaarkood ee maskaxda ku soo dhaca:
Kuwaas aan dhammaanayn safafka dhaadheer ee taleefanka ee bixiyaha adeegga macaamiisha.
Boorsadaas oo aad uun ku lumisay jidkii aad ku tagi lahayd bisha Malabka.
Qolkaas hudheelka ah ee qasan ee ku dhammaaday qarashka ku baxa kaarkaaga deynta.
Liistadu way sii socotaa… Way iska socotaa iyada oo aan la oran dhammaan tusaalooyinkaani waxay ka kooban yihiin khibrad macmiil oo xun oo u baahan faragelin degdeg ah.
Xaqiiqdii, daraasad ay sameeyeen Golaha Xiriirka Macaamiilku waxay heleen laba faahfaahin oo xiiso leh oo ay tahay inay qayb ka noqdaan istiraatiijiyad macaamiisha shirkad kasta: Waxay sheeganeysaa:
Macaamiisha ka farxinta ma dhisayso daacadnimo; yareynta dadaalkooda - shaqada ay tahay inay qabtaan si loo xaliyo dhibaatadooda — ayaa qabata.
Golaha Xiriirka Macaamiisha
Tan macnaheedu waxa weeye in nooca-ku-darista magacaagu ay tahay inay ku wareegto yareynta welwelka macaamiisha halkii aad ka bixin lahayd waxyaabo qurux badan oo faa iido yar leh.
Ku darista raadinta ugu horreysa, waxay leedahay:
Ku-talagal ula kac ah aragtidan waxay gacan ka geysan kartaa hagaajinta adeegga macaamiisha, yareynta kharashaadka adeegga macaamiisha, isla markaana hoos u dhigeysa xanaaqa macaamiisha
Key Takeaway: Macaamiisha ayaa diyaar u ah inay ka aargutaan sababo la xiriira adeegyo xun marka loo eego shirkadaha abaalmarinta ku siiya adeeg wanaagsan. Haddii sumaddaadu aysan ka fekereynin cagteeda oo ay yareyneyso qormada dambe ee cabashooyinka macaamiisha ee sii kordheysa, waxay ku dhici doontaa godka bakaylaha - marna dib uma soo nooleyn doonto.
Su'aalaha Muhiimka ah ee la tixgelinayo marka la qabanayo "Macaamiisha-Koowaad" Qaabka
Marka ay timaaddo amaahinta gacan caawimaad iyo dhegeysi naxariis leh macaamiishaada, waxaa jira su'aalo muhiim ah oo u baahan gudaha iyo baaritaanka:
Nooc Su'aalo Badan oo Guud ah:
Waa ayo macaamiishaadu?
Maxay yihiin baahiyahooda / rabitaankooda?
Ma qori kartaa xulashooyinka kaladuwan ee tirakoobyada kala duwan?
Nooc Su'aalo Gaar ah oo Su'aalo ah:
Marka laga eego dhinaca macaamilka, sidee “degdeg” u tahay degdeg marka ay timaaddo jawaabaha? Ma 10 ilbiriqsi, 5 daqiiqo, saacad, mise maalin?
Waa maxay nooca dhexdhexaadka ah ee aad u adeegsanayso aasaaska nooca weydiinta / welwelka. Asal ahaan, waxay u baahan tahay kala soocid u dhexeeya arrimaha u baahan taageerada taleefanka iyo arrimaha wax looga qaban karo khadka tooska ah. Caadi ahaan, arrimaha maaliyadeed waxay u baahan yihiin taageero taleefan si dhakhso leh oo xallin wax ku ool ah loo helo.
Tilmaam waxtar leh: Marka ay timaado fahamka macmiilkaaga, u qaado tan sidii suulka suulka:
Dhageyso waxa ay macaamiishaadu kuu sheegayaan - laakiin aad uma dhaweynayaan.
Wareersan? Aan soo qaadano tusaale. Waxa aan uga jeedno ayaa ah in inta macaamiisha ay weydiisan karaan taageero taleefan, waxa ay dhab ahaan doonayaan waa jawaab deg deg ah. Si taas loo gaaro, waxaa aad loogu talinayaa in kooxdaada taageertaa ay soo maraan tababar kaas oo ka caawin kara iyaga inay si dhakhso leh oo horudhac ah uga jawaabaan weydiimaha macmiilka.
Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka Qalabka Caawinta Macaamiisha Sare: Tilmaame Deg Deg ah
Shaki kuma jiro in markay timaado adeegyada macaamiisha, shirkado kaladuwan ay doortaan istiraatiijiyado kala duwan - iyadoo lagu saleynayo baahidooda, rajooyinka macmiilka, walaacyada miisaaniyadda, iyo wixii la mid ah. Waxaa intaa sii dheer, oo leh fursado badan oo la heli karo maanta, waxay ku noqon kartaa jahwareer iyo culeys badan in la yiraahdo ugu yaraan. Si aan wax kuugu fududeyno, waxaan ku taxnay faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka ugu sarreeya ee afarta kanaal ee muhiimka ah ee taageerada macaamiisha ficil ahaan maanta, kuwaas oo ah:
Ma "Wicitaan Wacan" Ayaa Lagu Bixiyaa Khibrad Macaamiil Iftiiminaya?
Faa'iidooyinka isticmaalka taageerada taleefanka:
Waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee la doorbido ee xulashooyinka adeegga macaamiisha ee noocyada adduunka oo idil.
Waa qaab isgaarsiineed oo toos ah kaasoo aan boos uga bannaanayn wax qalad ama is faham la'aan ah.
Waxay si dhakhso leh oo sax ah wax uga qabataa walaaca iyo dareenka macaamiisha.
Waxay wax ku ool u tahay daryeelka arrimaha murugsan ee degdegga ah ee ay la kulmi karaan macaamiisha.
Qasaarooyinka isticmaalka taageerada taleefanka:
Waxay u muuqan kartaa "mid duugoobay" ama mid duugoobay gaar ahaan jiilka soo koraya maadaama ay doorbidayaan qoraalka qoraalka.
Waxay u horseedi kartaa cadaadis iyo jahwareer xad dhaaf ah haddii macaamiisha ay ku dambeeyaan sugitaanka muddo dheer. Tani waxay caadi ahaan dhacdaa haddii wakiiladu mashquul yihiin ama haddii shirkaddu ka hooseyso shaqaale.
Arimaha farsamada sida shabakada oo liidata ayaa ka hor istaagi karta macaamiisha inay u yeeraan caawimaad.
Noqoshada "Wadahadal" Ma Khasaare Ka Dhiman Ka Fiican Yahay?
Faa'iidooyinka isticmaalka taageerada sheekada:
Waxay bixisaa xallinta weydiinta degdeg ah oo wax ku ool ah - mararka qaarkood sida sare sida 92% macaamiisha dhexdooda!
Waa bedel ka raqiisan taageerada taleefanka waxayna u dhaqantaa saldhig aqoon weyn.
Waxay awood siisaa wakiilada / bot-ka inay kula sheekaystaan ​​dad badan isla waqtigaas. Xaqiiqdii, xogta ay soo saartay CallCentreHelper waxay soo jeedinaysaa in "70% wakiilada wada qaban kara 2-3 wada hadal isla mar, halka 22% wakiilada taageerada ay qaban karaan 4-5 wadahadal markiiba.
Waxay ka caawineysaa shirkadaha inay otomatig ka dhigaan adeegyada isla markaana ay siiyaan khibrad hagitaan leh iyaga oo isku daraya astaamaha mustaqbalka sida chatbot iyo wada-baarista siday u kala horreeyaan.
Waxay bixisaa awood u lahaanshaha la socoshada wadahadalka (badiyaa iyada oo loo marayo dashboard) taas oo u adeegta tixraac habeyn ah mustaqbalka macaamilka iyo sidoo kale wakiilka macaamiisha.
Waxay awood siineysaa sumadaha maadaama ay ka faa'iideysan karaan aragtiyo qiimo leh (oo laga soo qaatay fadhiyada wada sheekaysiga tooska ah) sida akhlaaqda iibsashada, cabashooyinkii hore, dhiirrigeliyaha iibsadaha iyo waxyaabaha laga filayo, iwm.
Qasaarooyinka isticmaalka taageerada wada hadalka:
Sida laga soo xigtay Kayako, jawaabaha qoraalka ahi waxay neceb yihiin macaamiishaada. 29% macaamiisha ayaa sheegaya inay ka helaan jawaabo qoraal ah kuwa ugu jahwareerka badan, 38% ganacsiyada ayaa ogolaaday.
Waxay u horseedi kartaa xallinta qanacsanaanta arrimaha haddii chatbot uusan awoodin inuu wax ka qabto walaaca macaamiisha oo ay tahay inuu adeegsadaha u wareejiyo wakiil. Caadi ahaan, waxay ku egtahay waqti badan waxayna u horseedaa macaamiil laga xumaaday.
Waxay si dhakhso leh uga kici kartaa jacaylka iyo waxtarka leh inay noqoto mid xanaaq badan haddii martiqaadyada sheekaysiga si xun loo isticmaalo ama si aad ah loo isticmaalo.
Ma ogeyd? Xogta ay daabacday 'MarketingDive' waxay sheeganeysaa in dadka ka weyn 55 ay tixraacayaan taageerada telephonic ee goobaha kale.
Boostadu waa dhexdhexaadka cusub ee Isgaarsiinta - Mise Waa?
Faa'iidooyinka isticmaalka taageerada iimaylka:
Waa mid ka mid ah noocyada isgaarsiinta ee sida weyn loo isticmaalo. Xaqiiqdii, xogta waxay soo jeedineysaa in dadku diraan 269 bilyan emayllada maalin kasta.
Waxay awood siineysaa sumadaha inay soo diraan weydiimo - habeen ama maalin, 365 maalmood sanadkii.
Waxay bixisaa caddayn iskaa wax u qabso ah, oo qoraal ah (maqnaanshaha erey kafiican) tixraaca mustaqbalka si qof walba markasta ugu jiro isla bogga.
Waxay labanlaab u tahay fursad ah in otomatig lagu sameeyo su'aalaha noocan oo kale ah adoo adeegsanaya tas-hiilaadyo lagu sheekeysto.
Waxay ka caawineysaa noocyada inay la xiriiraan macaamiisha qaab habeysan oo aan rasmi ahayn. Waxaad sidoo kale dabagal ku sameyn kartaa wada hadaladii hore si fudud.
Qasaarooyinka isticmaalka taageerada iimaylka:
Waxay u horseedi kartaa khaladaad aan khasab ahayn. Tusaale ahaan, emaylkan 'Amazon' waxaa loo diray dad aan ilmo filanayn oo qaarkoodna xitaa arrimaha taranka leeyihiin! Sidaad qiyaasi karto, carada dadweynuhu waxay mareysay meeshii ugu sarreysay. Hubinta liisaska macaamiisha emailka otomaatigga ah liis kasta oo hadda-iyo-markaa waa lagama maarmaan in laga fogaado dhibaatooyinka sida kuwan oo kale ah.
Waqti badan ayey qaadataa marka laga soo tago taageerada taleefanka.
Ma bixiso qaraar weydiin deg deg ah maadaama emayllada ay qaadaneyso waqti dheer si looga jawaabo. Tani waa wax weyn oo xun sida Forrester Research ay sheeganeyso in "41% macaamiisha ay filayaan jawaab e-mayl ah lix saacadood gudahood."
Waxay ubaahantahay xirfado badan oo gaar ah sida awooda aqrinta maskaxda isticmaaleha iyo aqrinta inta udhaxeysa khadadka. Xidhiidhku waa mid aan toos ahayn oo wuu isku kici karaa. Isku soo wada duuboo, macnaha guud ee isgaadhsiintu si dhib yar ayuu ku lumi karaa iyada oo la is weydaarsanayo emayllo badan.
Taageerada Warbaahinta Bulshada:
Lahaanshaha joogitaanka bulshada ee khadka tooska ah ma Boonbaa mise Bane?
Faa'iidooyinka isticmaalka taageerada warbaahinta bulshada:
Waxay bixisaa habab kala duwan oo ay shirkaduhu wax uga qaban karaan walaaca isticmaalaha sida faallooyinka boostada, wada hadalka gaarka ah / tooska ah, iyo farriimaha kooxda. Waxay kaa caawinaysaa sameynta cilmi baarista suuqa iyo fahamka isticmaalahaaga sifiican.
Ahaansha dadweyne ahaan dabiici ahaan, waxay ka caawisaa dadka isticmaala jawaabaha su'aalaha laga yaabo inay hayaan maaddaama qof uu horey u sii dhajiyay kahor. Calaamaduhu waxay abuuri karaan gole bulsho oo isku xira dadka isku fikirka ah isla markaana ka caawiya sidii wax looga qaban lahaa su'aalahooda / walaacooda.
Macno ahaan waa bilaash-bilaash ah waxayna siisaa fursad weyn macaamilada ka jawaab celinta.
Waxay u noqon kartaa fursad weyn oo loogu talagalay noocyada inay ku guuleystaan ​​kalsoonida isticmaalaha iyada oo loo marayo macaamiisha soo dhejinta khibradaha wanaagsan. Astaamuhu sidoo kale waxay isticmaali karaan dareen kaftan ah waxayna noqon karaan kuwo hal abuur leh wax ka qabashada dhibaatooyinka isticmaalaha! Skyscanner wuxuu si qurux badan ugu muujinayaa tusaalaha kore.
Waxay muujineysaa awooda shirkadda inay wax ka bedesho oo ay la jaan qaado waqtiyada firfircoon maadaama firfircoonida warbaahinta bulshada ay tahay daruuri maanta. Isugeyn weyn sida cilmi baaris ay sameysay MarketingDive ayaa saadaalisay in "25 sano jir waxaana ugu horreyntii loo doortay baraha bulshada inay doorbidaan isgaarsiinta adeegga macaamiisha. ”
Waxay sidoo kale awood u siisaa ka-qaybgalka macaamiisha weyn waxayna ka caawisaa sumadaha inay si dhab ah u dhisaan xiriiro qiimo leh isticmaaleyaasha.
Qasaarooyinka isticmaalka taageerada warbaahinta bulshada:
Waxay wax u dhimi kartaa sumcadda sumcadda haddii waxyaabo badan oo taban lagu arko bogagga bulshada sida Facebook, Twitter, iwm. Daacadnimada iyo soo socoshada waxay gacan ka geysan kartaa yareynta dhaawaca illaa heerka ugu sarreeya ee suurtogalka ah.
Waxay ku socotaa halista dabeecadaha aan loo baahnayn (tusaale ahaan xoog sheegashada / hadalada sharafta leh) waxayna sidoo kale u horseedi kartaa qatar xaga amaanka ah sida macluumaad daadinta ama jabsiga.
Waxay u baahan tahay kormeer joogto ah iyo jawaab celin deg deg ah si looga fogaado flak macaamiisha.
U sheegista dib-u-celinta si ay uga badato waxyaabaha macaamiisha ka filayaan waxay ku habboon tahay inay keento jahwareer, waqti lumis iyo dadaal, iyo bixinta qaali ah.
Marka ay timaado xulashada qalabka isgaarsiinta ee saxda ah ee macaamiisha, ma jiro hal-qaab-ku-habboon oo dhan oo noocyada ay qaadan karaan. Ururradu waxay u baahan yihiin inay ku saleeyaan qodobbo badan oo muhiim ah sida ilaha la heli karo, miisaaniyadda iyo caqabadaha waqtiga, dalabaadka macaamiisha iyo filashooyinka isticmaalaha, iwm.
Adoo siinaya macmiil aan hagaagsaneyn, oo aan dhib lahayn, shakhsi ahaaneed, iyo macaamiil wanaagsan oo adeegsadaha ah.
Adoo hubinaya in istiraatiijiyaddu aysan ku kicin shirkadda - dhaqaale ahaan ama haddii kale.
Iyagoo siinaya qiimo-kordhin macno leh dhammaan daneeyayaasha ku lugta leh - maal-gashadayaasha iyo macaamiisha ilaa shaqaalaha shirkadda iyo bulshada guud ahaan.
Ku hubaysan macluumaadkan oo dhan, waxaa la joogaa waqtigii lagu socon lahaa hadalka oo la bixin lahaa khibrad macmiil ah oo aan caddayn - mid madadaalo iyo waxbarta macaamiisha isla mar qudha. Ma joogtaa? Waxaan u maleynay sidaas.
Tags: sumcad sumadeedtaageero emailtaageerada warbaahinta bulshada
Ashwini wuxuu jecel yahay Ganacsiga, Ganacsi, E-commerce, iyo Suuqgeynta Dijital ah. Way la shaqaysaa Hel sida khabiir suuq geynta suuq geynta ah. Iyadu waa naf xor ah iyo aqoonyahan dhiirrigelin ah oo waqtigeeda firaaqada ah la qaata nafteeda, mar la jecel yahay, muusigga, iyo sidoo kale daawashada & cayaaraha isboortiga. Waxay kuxirantahay badda waxayna waddooyinka u tahay safar raaxo xiise-doon ah si ay u hesho khibrado cusub iyadoo eegaysa nolosha sida shaqadeena farshaxanka.
Tilmaamaha Ugu Dambeeya ee Bilaabista Adeegga Fiidiyowga rukunka ah
Waa Maxay Doorka looga Baahan Yahay Waaxda Suuqgeynta Digital-ka Maanta?